My Premium Zone - Page3- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 31 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - My Premium Zone
ကို bagothar နဲ့ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
နောက်ထပ် premium account တွေပေးတဲ့ ဆိုဒ်တွေကိုလဲတင်ပေးပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ zawlinoo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by zawlinoo
20-06-2011, 01:17 PM
Fileserve Premium Links Generator
ဒါလေးကတော့ Fileserve အတွက်ပါခင်ဗျာ။ အသုံးပြုပုံကတော့ အပေါ်က Hotfile နဲ့အတူတူပါပဲ။ Fileserve link ကို copy လုပ်ထည့်ရုံပါပဲ။ ကျွန်တော်လေးငါးဖိုင်လောက် စမ်းပြီးဒေါင်းကြည့်တာတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ စောင့်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။
ဒါတွေက Mac book မှာဆို မရဘူးလားဟင်။ IDM မှသုံးလို့မရတာ။ how can i use? please help me!
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ mghtwe405 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုbagothar ရေ လင့်က မပါဘူးနော်၊
နောက်ပြီး cookies တွေရနိုင်တဲ့ ဆိုဒ်လေးတွေကိုလဲ ပြောပေးပါ
cookies checker software လေးရှိရင်လိုချင်ပါတယ်
ကျွန်တော်က အခုနောက်ပိုင်း Links Generator တွေ မသုံးဖြစ်တော့ ဆိုက်တောင် ပျောက်နေတယ်။ အဲဒါမနည်းလိုက်ရှာ လိုက်ရတယ်.. ကျွန်တော်အောက်မှာ အကုန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. အထဲမှာ ပါတာတွေကတော့ Fliesonic+wupload downloader ၊ Cookies Chacker ၊ Fileserve , Hotfile , Megaupload Premium Link Genrators တို့ ပါဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. အသေးစိတ်ရယ်၊ Premium Accounts တွေ၊ Cookies တွေထပ်လိုချင်သေးယင်တော့ ဒီနေရာမှာ သွားကြည့်လိုက်ပါ.. တခြားရနိုင်တဲ့ ဆိုက်တွေကိုလည်း ကျွန်တော်အပေါ်မှာ ရေးထားခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်သုံးဖြစ်နေတဲ့ Premium Link Generator Site တွေကိုလည်း အောက်မှာ ပေးထားပါတယ်.. အဆင်ပြေပါစေခင်ဗျာ..
Premium Links Generator ဆိုက်များ
All Links Generators + Cookies Chacker
မောင်သံသရာ, g00gle, mghtwe405, minthike, thureinsoe, zo
အားလုံးလိုချင်တာတွေက်ို ဒေါင်းလို့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်
ဒါပေမဲ့ နေ့တိုင်းတော့ ရှာနေရတယ်
13-07-2011, 03:58 AM
ဒီအောက်ကလင့်မှာလဲကိုညီနေမင်းစပြီး " Hotfile,Megaupload စတာတွေကို Premium account မလိုဘဲ Download လုပ်ကြစို့ " ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေး
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ အေးမင်းမောင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, arkaraung, bagothar85, g00gle, minthike, zo
Premium Account လိုချင်သူများ ဒီတော့ပစ်ကို ကြွပါ
Premium Account နဲ့ ဒေါင်းလော့လုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုတဲ့သူများ အတွက်
ဒီတော့ပစ်လေး ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါတယ် ..။
ကျနော်နေ့တိုင်းUpdate ဖြစ်အောင် တင်ပေးသွားပါ့မယ် ။
ကျနော်ပိုင်တာ တစ်ခုမှ မရှိပါ .. လိုက်လံရှာဖွေထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုနဲ့ အဆင်ပြေနေပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ တင်ပေးပါပြီ။
User : ldriggers@comcast.net
Pass : maxell00
User : u2sunnyday@yahoo.com
Pass : 666222
User : www.abodi1713@gmail.com
Pass : 038991713
User : grndmstrjh@aol.com
Pass : 42694269
User : garnmann@gmx.de
Pass : renner
User : reine@theballpark.se
Pass : blutter
2011-09-22 11 48
User : kwatb@tiscalinet.it
Pass : alessio
နောက်ရက်အတွက် အကောင့်များအား အောက်မှာ ဆက်လက်တင်ပေးသွားပါ့မယ်.။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, bagothar85, g00gle, htoo war, microsoft, phyomyintthein, PyaitSone, tu tu, zo
Username : dragonal42
Password : chavaler	23 Sep 2011	400.00Gb
Username : SixWinged
Password : yazzaa	25 Sep 2011	1.2Tb
Username : mrgreg
Password : 85798579	21 Sep 2011	2.3Tb
Username : rudeman67
Password : awszzz	16 Oct 2011	4.2Tb
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, g00gle, microsoft, minthumon, PyaitSone, tu tu, zo
User : cronox2@gmail.com
Pass : jedm00dy
2011-09-17 16 42
User : james@jbsservices.co.uk
Pass : birky18
2011-09-17 19 46
User : sou_morita@hotmail.com
Pass : punipuni
2011-09-17 14 17
User : rouninkenshin2002@hotmail.com
Pass : godslayer
2011-09-17 07 34
User : ibarra_j@speedy.com.ar
Pass : javapower
2011-09-18 20 47
User : andrewmoig@hotmail.com
User : fwarmsley@gmail.com
Pass : Garion1
မှတ်ချက်။ တစ်ခုပြောထားကြည့်မယ်နော် .. ကျနော် တင်ပေးတဲ့ လင့်တိုင်းက ကျနော်စမ်းပြီး အကောင်းတွေပဲ တင်ပေးတာပါ ..။ ဒါပေမယ့် ဒီပိုစ့်ကိုဖတ်ပြီး အဲဒီအကောင့်နဲ့ ၀င်တဲ့သူများသွားလို့ ပိတ်သွားရင်တော့ မနက်ဖြန် သူများထက်ဦးအောင် ဒီတော့ပစ်မှာ လာယူကြပေါ့ဗျာ။
Last edited by breezes; 17-09-2011 at 04:48 PM..
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, bagothar85, g00gle, kyawminkhoung, microsoft, minthike, minthumon, PyaitSone, zo
User : lustrini@tin.it
Pass : pistola
2011-12-02 13 19
NEW HOTFILE PREMIUM
username : andrei82
Password : gonzomarketing	17 Oct 2011	400.00Gb
Username : kogboy317
Password : 3790136	17 Oct 2011	1.7Tb
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, essential, g00gle, microsoft, minthike, zo
User : nick.misc@gmail.com
Pass : nitronat
2011-09-24 21 27
User : sun_tan_sam@yahoo.co.uk
Pass : taylor37
2011-09-23 14 53
User : gregoryjobee@yahoo.com
Pass : BIGCITY007
2011-09-23 05 18
User : balage@centrum.cz
2011-09-22 15 03
User : fabreal@wanadoo.fr
Pass : alphie
2011-11-21 15 15
User : robert@wroecom.net
Pass : gromet
2011-09-21 12 07
User : jimwest59@yahoo.com
Pass : ottoad59
2011-09-21 16 10
User : wupload2@2you.com.pl
Pass : KMOCQRaQiv3Id4XC
Username : rase
Password : rsylmz
Expired : 21 Oct 2011
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, essential, g00gle, phyomyintthein, PyaitSone, zo
2011-10-15 19 08
User : taibros@virginmedia.com
Pass : 1598aleo
2013-02-26 23 19
User : dgnofdarkness@yahoo.com
Pass : supsup
2011-10-27 09 41
User : jtmonen3336666@yahoo.com
Pass : alexis
2011-10-20 06 45
User : oldbay304@rogers.com
Pass : oldbay
User : katochu@gmail.com
Pass : kawakami
User : tsbsus9988@o2.pl
Pass : AIhuyYSAB788
Password: nimpa99	23 Sep 2011	215.00Gb
Password :1985enes	23 Sep 2011	1.7Tb
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ breezes အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, PyaitSone, zo
ှုIEEE xplore user name နဲ့ password လေးများသိရင် ဝေငှပေးကြပါခင်ဗျာ
my premium zone မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံး
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 126 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by r0m30
hotfile cookies တွေမရတော့လို.
ကဲ ပေးလိုက်ပြီ ဗျာ
ံHOTFILE PREMIUM ACCOUNT
2012-01-01 22 56 CDT
နောက်လည်း ဒီနေရာမှာ ထပ်တင်ပေးသွားပါမယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ minnthu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, PyaitSone, tu tu, zo
Visit minnthu's homepage!
Find More Posts by minnthu
ဒီနေ့အတွက် update လေးတွေ ထပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ.......
FILESONIC PREMIUM ACCUONT
2012-03-27 03 58
2012-01-16 15 47
2011-12-27 11 59
HOTFILE PREMIUM ACCUONT
2012-01-26 12 49 CDT
2012-01-27 16 28 CDT
2012-05-03 02 28 CDT
တစ်နေ့တစ်နေ့ အချိန်ကုန်ခံ ထိုင်ပြီး ဒေါင်းရတဲ့ဘ၀ကို ကင်းဝေးကြပါစေဗျာ ...........
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, bagothar85, PyaitSone, tu tu, zo
ဒီနေ့ အတွက် UPDATE လေးတွေပါ။
User : pie_zaa_kus@hotmail.com
Pass : piepie
2012-03-02 04 07
User : bloodlord23@gmx.net
Pass : 3hd4g9d
User : sbzx@premium4you.org
2011-12-31 00 06
User : fulgrim@mixrelease.com
Pass : mixrelease.com89658
2012-01-28 10 02
User : fedorov.i@list.ru
Pass : fedorov
2012-01-02 10 57
User : shaunk03@hotmail.com
User : hasanmgd@yahoo.com
2012-01-17 12 28
2012-06-27 03 51
User : molleken
Pass : molleken
2012-03-17 11:01:38 CDT
User : evil_twin
Pass : 1qaz2wsx
2012-01-30 04 42 CDT
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ minnthu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ငြိမ်းချမ်း, arkaraung, bagothar85, PyaitSone, tu tu, zo
User : marz187@gmail.com
Pass : 3340421
User : tom_pman@hotmail.com
Pass : ginger
2012-01-16 23 35
User : nikolaj@harving.dk
Pass : Harv9977
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ minnthu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်ပေါ်ဦး, ငြိမ်းချမ်း, မြန်အောင်သား, arkaraung, bagothar85, PyaitSone, tu tu
User : artiglio_x@yahoo.it
Pass : toranaga
2012-01-11 15 28
User : giorgosk106@yahoo.gr
Pass : george80
User : racer@suddenlink.net
Pass : whale123
2012-01-24 21 02
User : zh001d0358@blueyonder.co.uk
Pass : ppkdrppj
2012-01-08 11 48
User : abdelmohcen15@hotmail.fr
User : honda-1n@sk2.aitai.ne.jp
Pass : shoudai
2012-01-26 08 24
User : bobfargas@hotmail.com
Pass : davidd13
2012-02-01 23 58
User : bennyjimenez1@gmail.com
2011-12-30 16 36
User : michael.lempicki@gmail.com
Pass : polski
User : alqattan2000@hotmail.com
Pass : Ilovelol0
User : birobiro_2005@libero.it
Pass : 11011973
User : denzky.patingo@gmail.com
Pass : bagsik01
ကိုminntu မတင်အားတဲ့ အတွက် ကျွန်တော်ရှာတွေ့တာလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..
User : mautes@hotmail.de
Pass : arminm
2012-03-11 20 21
User : heinrichs.marc@gmx.de
Pass : d4c3b2a1
2012-01-27 08 31
User : gomezchris@free.fr
Pass : way9708
2012-01-29 09 10
User : eduardodc@i.softbank.jp
Pass : jebyebye
2012-01-31 18 38
မြန်အောင်သား, arkaraung, bagothar85, minnthu, PyaitSone, tu tu
User : zulfiali86@gmail.com
Pass : pakistan
User : ged87boro@yahoo.co.uk
Pass : 1235813
2012-01-26 12 41
User : maitrot.david@netcourrier.com
Pass : Salarine
2012-02-02 19 54
2012-01-08 22 27
User : gedboro1
User : mollaborjan.c?
arkaraung, bagothar85, minthike, PyaitSone, tu tu, zo
ဒီနေ့အတွက်ပါဗျာ update လေးတွေ
User : charles.dolson@me.com
User : rise_to-grace@hotmail.co.uk
2012-04-15 17 20
User : ling2502@googlemail.com
2012-01-10 13 04
ဆောရီးဗျာ ကျွန်တော်လည်း နည်းနည်း အလုပ်များနေတော့ ဖိုရမ်ထဲမ၀င်ဖြစ်ဘူး
$ညိုမင်းလွင်$ ကို ကျွန်တော့်ကိုယ်စား တင်ထားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ....။
Last edited by minnthu; 10-01-2012 at 11:35 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ minnthu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, minthike, PyaitSone, tu tu, zo
်filesonic premium account
User : danielgrace29@yahoo.com
Pass : antigone
2012-03-25 14 09
User : mailanbernd@gmail.com
Pass : rothaus
2012-03-22 15 29
User : mebalien@hotmail.com
Pass : asshole5
2012-01-10 23 26
User : eset@mixrelease.com
Pass : mixrelease.com456
User : ecumali@superonline.com
Pass : berba59
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ minnthu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, minthike, zo
Premium Account တွေက အသုံးပြုသူများတာနဲ့ အချိန်တိုအတွင်းမှာ အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး..
ကျွန်တော် Account တွေ အသစ်တင်တိုင်း ဒီနေရာလေးမှာပဲ Edit လုပ်ပြီးတင်ပေးပါ့မယ်..
ကျွန်တော်လည်း အခုတလော အလုပ်တွေ များနေတာနဲ့ အကောင့် အသစ်တွေ ထပ်မတင်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်..
ဒါနဲ့ အသုံးပြုလိုသူတွေ အဆင်ပြေနိုင်အောင် အမြဲတန်း အပ်ဒိတ်ဖြစ်နေတဲ့ အောက်က နေရာလေးမှာ သွားရောက်
Last edited by $ညိုမင်းလွင်$; 09-05-2012 at 07:30 PM.. Reason: Update
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ $ညိုမင်းလွင်$ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဂျော်နီရှိန်, မောင်နေလင်းဇော်, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, နိုးတူး, aung myint, azp09, bagothar85, honelay86, minnthu, minthike, PyaitSone, zo
Hotfile,Megaupload စတာတွေကို Premium account မလိုဘဲ Download လုပ်ကြစို့ ညီနေမင်း Websites များနှင့်ပတ်သက်၍ 21 10-01-2013 11:47 AM
Premium Clock v2.5 KTM Applications007-09-2008 04:28 PM